Semalt: သင်၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် SEO အထူးကျွမ်းကျင်သူ ၄ မျိုး
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်ကွဲပြားခြားနားသော SEO အမျိုးအစား ၄ မျိုးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများကြောင့်လူအများစုသည်စရိုက်အမျိုးမျိုးနှင့်ရောနှောနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုစီသည်တိကျပြီးရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုလိုသည်၊ မည်သည့်အားသာချက်များရှိနေသည်ကိုလေ့ကျင့်သူမရွေးမီ၊
အလက်ဇန်းဒါး Peresunko ၏ဖောက်သည်အောင်မြင်မှု Manager ကို Semalt , ဆောင်းပါးဆွေးနွေး SEO ဆိုသည်မှာအကောင်အထည်ဖော်မှုဘို့တကောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အကြောင်းကြားသင့်သောပညာရှင်များလေးအမျိုးအစားများ။
၁။ ဒေတာ / လေ့လာသုံးသပ်သူများ
ကြီးမားသောဒေတာအစုများကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းတို့သည်အနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်ကိုလည်းလိုအပ်သည်။ ဤ SEO အမျိုးအစားအထူးကျွမ်းကျင်သူများသို့ ၀ င်ရောက်လာသောသူများသည်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသမိုင်းရှိကြသည်။ သူတို့၏အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများသည်အများအားဖြင့်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်တွင်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးဖန်တီးမှုနယ်ပယ်တွင်မဟုတ်ပါ။ ဤ SEO ကျွမ်းကျင်သူများသည်ဒေတာ၊ ဒိုင်ခွက်များနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအစီရင်ခံစာများကိုဆက်နွယ်ခြင်းအားဖြင့်တရားဝင်မှုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားသည်။ သူတို့သည်အတိတ်မှသင်ခန်းစာယူကြပြီးထိုသတင်းအချက်အလက်သည်အနာဂတ်ကိုအသိပေးနိုင်သည်။
ဝဘ်စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများကိုစိတ် ၀ င်စားပြီးနောက်သူတို့ကကွင်းပြင်သို့ပုံမှန်ဝင်သွားသည်။ ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်နောက်ကွယ်ရှိအဘယ်အရာကိုသူတို့သိလိုကြမည်မဟုတ်။ ၄ င်းတို့၏အဓိကပြconcernနာမှာ site ကြီးထွားမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သောအရာများအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် W3C လိုက်နာမှု၊ အချက်အလက်ဖမ်းယူမှုနှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်သည်။ ဤ SEO အမျိုးအစားများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ UI နှင့် UX ဆွေးနွေးမှုများသည်သူတို့လုပ်သည့်အရာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏မဆိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနအတွက်နည်းပညာ SEO သည်အလွန်စျေးကြီးသည်။ တိုးတက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုလျှင်၎င်းတို့သည် WordPress ကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရရှိရုံထက်မကလိုအပ်သည်။
SEO သည်အဓိကအာရုံစိုက်မှုသည် On-site optimization အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သူတို့ဟာလူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ချိတ်ဆက်မှုမျိုးဆက်များမှတဆင့်အသွားအလာဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ မည်သည့်အသွားအလာပမာဏကိုပေးသည်ကိုသိရန်စီမံကိန်းများနှင့်အမြဲတမ်းစမ်းသပ်သည်။ သူတို့သည်ဆိုက်အတွက်မည်သည့်အကြီးမားဆုံးသောလမ်းကြောင်းများဖြစ်နိုင်မည်ကိုသာစိတ် ၀ င်စားပြီး၎င်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုက်စားသည်။
4. အထွေထွေ / novice
သူတို့သည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးပြီး SEO ပုံစံအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းသောချဉ်းကပ်မှုရှိသည်။ သူတို့သည် SEO tool များမှကျွမ်းကျင်မှုများကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှကောက်ယူပြီးလေ့လာလိုစိတ်ရှိခြင်းကြောင့်မြန်ဆန်စွာလိုက်ရှာကြသည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသူသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသောလူတစ် ဦး အတွက်ဘတ်ဂျက်အနည်းငယ်သာအလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။ သူတို့ကအလုပ်ကြိုးစားသူရှိပြီးသိသိသာသာမြေပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
In-house SEO ဆိုသည်မှာသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်မဟုတ်ပါ?
ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ SEO ကျွမ်းကျင်သူများအားအေဂျင်စီများသို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံများထံမှငှားရမ်းခြင်း (သို့) ငှားရမ်းခြင်းတို့နှင့်အတူရုန်းကန်နေရသည်။ အေဂျင်စီများသည် In-house SEO အတွက်အားသာချက်တစ်ခုရှိသည်။ သူတို့သည်ယခင်ပုံစံများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ House SEO များသည်ကုမ္ပဏီပေါ် မူတည်၍ သိသာသောပမာဏကိုတွေ့ရသည်။
အေဂျင်စီ SEO သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ထူးကဲသည်မှာ၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်သီးခြားလွတ်လပ်သောအချက်အလက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည် ၀ ယ်ယူသူစက်မှုလုပ်ငန်း (သို့) ပထဝီအနေအထားအကြားဆက်နွယ်သောအချက်အလက်များမှထွက်ပေါ်လာသည်။ သူတို့ကလာမည့် algorithm ကိုပြန်တယ်သို့မဟုတ်ကျဆင်းသွားအကြောင်းကိုသတင်းပေးကူညီပေးသည်။
၀ င်ငွေ၏အဓိကအရင်းအမြစ်သည်အဖွဲ့အစည်းသည် SEO အပေါ်တွင်များစွာမှီခိုနေလျှင်အိမ်တွင်း SEO ကိုငှားရမ်းရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အရင်းအမြစ်များ၊ သမိုင်းနှင့်ဗဟုသုတများကိုစုဆောင်းခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်လိမ့်မည်။
SEO အမျိုးအစားလေးမျိုး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရစျေးကွက်သမားသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ လူအများစုကသူတို့ကိုယ်သူတို့ SEO နယ်ပယ်ထဲမှာရှိနေတုန်းသူတို့ကိုယ်တိုင် SEO သင်ပေးတယ်၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုကိုက်ညီသောလေးခုကနေရိုရှိပါတယ်။